Ansarka Zodiac qadiimiga ah - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Kansarku wuxuu caadi ahaan u muujiyaa carsaanyo wuxuuna ka yimid ereyga Laatiinka ee loogu talagalay dib u habeyn. Horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa June 22 iyo July 23 waxaad tahay Kansarka. Akhrinta horoscope casriga casriga ah ee zodiac qadiimiga, waxaad raacdaa talada horoscope ee kansarka si aad u hesho jacayl, nasiib wacan, caafimaad, oo aad u hesho aragti shakhsi ahaaneed.
Laakiin sidee ayay dadkii hore u akhriyi jireen Kansarka bilowgii? Maxay uga dhigan tahay iyaga?
Ka digtoonow! Kajawaabista tan waxay kuu furaysaa horoscope-kaaga habab aanad filayn – kugu gali doonta safar ka duwan markaa waxaad damacsanayd markaad hubiso calaamada horoscope-kaaga…
Falaagayaasha Kooxda Kansarka
Halkan waxaa ah sawirka kooxda Xiddigaha Kansarka. Ma ku arki kartaa wax u eg carsaanyo xiddigaha?
Sawirka xiddigta Kansarka. Ma arki kartaa carsaanyo?
Haddii aan ku xidhno xiddigaha ku jira Kansarka khadadka, weli way adag tahay in la ‘arko’ carsaanyo. Waxay u egtahay Y.
Kooxda Kansarka oo leh xiddigo ay ku xiran yihiin sadar
Halkan waxaa ah sawirka National Geographic boodhka zodiac, oo muujinaya Kansarka Waqooyiga Hemisphere.
Shaxda xiddigta Qaranka ee National Geographic oo leh Kansarka oo la wareegay
Sidee bay dadku markii hore ula yimaadeen carsaanyo kakan? Laakin Kansarku wuu soo noqdaa inta aan ognahay taariikhda bini aadamka.
Sida xiddigaha kale ee zodiac, sawirka Kansarku maaha mid iska cad oo ka mid ah xiddigaha laftiisa. Ma aha mid ku dhalanaysa kooxda xiddigaha. Balse, fikradda ee carsaanyo ayaa ka hor yimid. Xiddiggii ugu horreeyay ayaa markaas fikraddan ku dul-saaray xiddigaha si ay u noqoto calaamad soo noqnoqonaysa.
Waa maxay sababtu? Maxay ula jeedeen dadkii hore?
Waa kuwan qaar ka mid ah sawirrada xiddigiska ee caadiga ah ee Kansarka
Sawirka xiddigiska Kansarka oo leh carsaanyo
Sawirka Zodiac Cancer oo leh kalluunka crayfish, ma aha carsaanyo iyo Cancer 69 calaamad
Halkan waxaa ah zodiac ee Macbadka Dendera ee Masar, in ka badan 2000 oo sano, oo leh sawirka kansarka oo ku wareegsan casaan.
Zodiac Masaarida qadiimiga ah ee Dendera oo leh Kansarka ayaa ku wareegsan
In kasta oo sawir-gacmeedku ku calaamadiyo sawirka ‘carsaanyo’, dhab ahaantii waxay u egtahay duqsiyo. Diiwaanka Masaarida ee ku saabsan 4000 sano ka hor wuxuu qeexayaa Kansarka inuu yahay Scarabaeus (Scarab) duqsiyo, calaamad muqadas ah oo aan dhimanayn.
Masar hore scarab ayaa astaan ​​u ahaa dib-u-dhalashada ama dib u soo kabashada. Masriyiintii waxay inta badan tusi jireen ilaahood Khepri, Qorraxda soo baxda, sida kuwa lamid ah scarab ama sida nin madax ah oo duqsiyo ah.
Khepri, oo ahaa Masridii hore ee Ilaaha wuxuu ku matalay madaxa duqsiyo. Iyada oo ku saleysan sawirada qabriga Boqortooyada Cusub
Kansarka Sheekadii Hore
Waxaan ku aragnay Virgo in Qur’aanka iyo Baybalka/Kitaabku sheegayo in Eebbe sameeyey xiddigaha. Wuxuuna siiyey hanuun ilaa waxyi laga soo dejiyo. saasayna u bareen Nabi Aadam iyo Wiilashiisii ​​ubadkooda si uu ugu waani Qorshihiisa. Virgo bilaabay sheekada oo sii sheegay in abuur bikrad iman doona.
Kansarka ayaa sheekada sii kordhiya. Xitaa haddii aadan ahayn Kansarka dareenka horoscope casriga ah, sheekada xiddigiska ee Kansarka ayaa mudan in la ogaado.
Macnaha asalka ah ee Kansarka
Masriyiintii hore aad ayey ugu dhow yihiin markii ugu horeysay ee Zodiac la soo saaro, sidaas darteed duqsiyo scarab, halkii ay ka heli lahaayeen carsaanyo horoscope casriga ah, ayaa fure u ah in la fahmo macnaha zodiac ee hore ee Kansarka. Khabiir ku taqasusay Masar Wallace Budge ayaa sidan ka sheegay Khpera iyo duqsigii scarab ee Masaaridii hore
KHEPERA waxa uu ahaa ilaah hore oo hore, iyo nooca walaxda ka kooban jeermiga nolosha kaas oo ku dhow in uu soo baxo jiritaan cusub; oo sidaas daraaddeed wuxuu u taagnaa meydkii kan ruuxa lahu ka soo sara kaci lahaa. Waxaa lagu sawiray qaab nin madaxa u haya oo cayayaankan noqday astaantiisa sababtoo ah waxay ahayd inay iskeed isu dhaliso oo iskeed isu soo saarto.
Sir WA Budge. Diinta Masar p 99
Beetle Scarab: Astaan ​​qadiim ah oo sarakicidda
Diqaha nabarrada leh ayaa soo mara dhowr marxaladood oo nololeed ka hor inta uusan ugu dambeyntii isu beddelin midhaha weyn. Ka dib marka ukuntu ka soo baxaan, nabarradu waxay noqdaan dirxiyo u eg dirxiga oo loo yaqaan grubs. Jidh-goos ahaan waxay ku qaataan jiritaankooda inay ku noolaadaan dhulka, iyagoo quudinaya walxaha burburaya sida saxarada, fangaska, xididdada ama hilibka qudhunka ah.
Ka dib markii ay u gurguurato sidii caws, ka dib waxay isku duuduubtaa chrysalis. Xaaladdan oo kale dhammaan dhaqdhaqaaqyadu way joogsadaan. Cunto hadda ma qaadato. Waxay xirtaa dhammaan dareenka. Dhammaan hawlihii noloshu way xidhmeen, xijaabkuna waxay ku dhuuntaan gudaha qumbaha. Halkan waxaa ku yaal saqafka metamorphosis, iyada oo jirkeedu uu milan yahay ka dibna dib-u-ururinta. Wakhtigii la ballamay ayaa nabarrada qaangaarka ahi ka soo baxaysaa qumbaha. Qaabka lamidka ah ee qaangaarka ah uma eka sida dirxiga oo kale kaasoo dhulka ku gurguuran kara. Hadda duqsigu wuu soo baxaa, duulaa oo kor buu u kacayaa hawada iyo qorraxdaba.
Masriyiintii hore waxay ixtiraami jireen duqsiyada scarab sababtoo ah waxay calaamad u ahayd sarakicidda la ballanqaaday.
Kansarka… sida Beetle Scarab
Kansarku wuxuu caddeeyaa in nolosheena ay raacdo qaab la mid ah. Hadda waxaynu ku nool nahay dhulka, annagoo addoommo u ah tacab iyo rafaad, oo gudcur iyo shaki ka buuxa – guntin la’aan iyo dhibaatooyin sida kuwa dhulka ka dhashay iyo kuwa wasakhaysan, in kastoo ay inagu dhex sidayaan abuur iyo bilowgii ammaanta aakhirka.
Markaa nolosheenna dunidu waxay ku dhammaataa dhimashada oo waxay u gudubtaa xaaladda hooyada oo kale ah taas oo qofkayaga guduhu uu ku seexdo dhimashada, iyada oo jidhkeenu uu sugayo qaylo-dhaanta qaylo-dhaanta oo ka soo baxda qubuuraha. Tani waxay ahayd macnihii qadiimiga ahaa iyo calaamada Kansarka – sarakicidda jidhku waxay kicisay markii Bixiyaha uu ku baaqayo.
Kansarka: Nolosha la sara kiciyey
Sida maqaarku uga dillaaco hurdadiisa, sidaas oo kale ayaa kuwa dhintay u soo toosi doonaan.
Oo qaar badan oo ku hurda ciidda dhulka ayaa soo toosi doona, qaarkood waxay u soo toosi doonaan nolol weligeed ah, qaarkoodna waxay u soo toosi doonaan ceeb iyo quudhsasho weligeed ah. 3 Oo kuwa xigmadda lahu waxay u dhalaali doonaan sida nuurka samada; kuwii kuwo badan xaqnimada u soo jeediyaana sida xiddigaha weligood iyo weligood.
Daanyeel 12: 2-3
Tani waxay dhici doontaa marka Masih – Masiix – wuxuu inagu baaqayaa inaan raacno wadadii sarakicidiisa.
20 Laakiinse haatan Masiixa ayaa kuwii dhintay laga sara kiciyey, isagoo ah midhaha ugu horreeya ee kuwa dhintay. 21 Dhimashadu nin bay ku timid, saas aawadeed sarakicidda kuwii dhintayna nin bay ku timid. 22 Siday dhammaan Aadan ugu wada dhintaan, sidaas oo kalaa dhammaan Masiixa loogu wada noolayn doonaa, 23 laakiin mid kasta markiisa, Masiixa midhaha ugu horreeya, markaas kuwa Masiixana wakhtiga imaatinkiisa. 24 Markaasaa dhammaadku iman doonaa, markuu isagu boqortooyada u dhiibi doono Ilaaha Aabbaha ah, markuu baabbi’iyo madax walba iyo amar walba iyo xoog walba dabadeed. 25 Waayo, waa inuu wax xukumo ilaa uu cadaawayaashiisa oo dhan cagihiisa hoostooda geliyo. 26 Oo cadaawaha ugu dambeeya ee la baabbi’in doonaa waa dhimasho. 27 Waayo, Wax walba cagihiisa hoostooduu geliyey. Laakiin markuu yidhaahdo, Wax walba waa la hoos geliyey, way cad dahay in laga reebay kan wax walba hoostiisa geliyey. 28 Markii wax walba la hoos geliyo isaga, markaas ayaa Wiilka qudhiisana la hoos gelin doonaa kan wax walba hoos geliyey isaga, inuu Ilaah wax walba u ahaado dhammaan.
1 Korintos 15 20-28
Kansarka: Muujinaya nuxurka cusub ee Jidhka sarakicidda
Sida xijaabka qaangaarka ah uu u yahay nuxur ka duwan, oo leh astaamo iyo karti aan la qiyaasi karin marka laga soo saaro cirridka gooryaanka u eg ee uu ka soo kacay, sidaas awgeed jidhkeena sarakiciddu wuxuu noqon doonaa nuxur ka duwan jidhkeena maanta.
Laakiinse innaga waddaninimadeennu waxay ku jirtaa jannada halkaasoo aynu weliba ka sugayno Badbaadiye kaas oo ah Rabbi Ciise Masiix. 21 Isagu wuxuu beddeli doonaa jidhkeenna liita inuu u ekaado jidhkiisa ammaanta leh, oo wuxuu ku beddelayaa xoogga uu isagu ku awoodo inuu wax kastaba isaga hoosaysiiyo.
Filibiin 3: 20-21
Laakiin mid baa odhan doona, Sidee baa kuwii dhintay loo sara kiciyaa? Oo jidh caynkee ah bay ku yimaadaan? 36 Doqon yahow, waxaad adigu beertid ma noolaado haddaanu dhiman. 37 Oo waxaad beertidba ma beertid jidhka noqonaya, laakiin iniintoo qudha, ha ahaato iniin sarreen ah, ama iniin cayn kale ah. 38 Laakiin Ilaah wuxuu iyada siiyaa jidh siduu u doonayay, iniin kastana jidhkeeda. 39 Hilib oo dhammu isku hilib ma aha, laakiin waxaa jira hilibka dadka iyo hilibka kaloo dugaagga, iyo hilibka kaloo shimbirraha, iyo hilibka kaloo kalluunka. 40 Oo waxaa jira jidhadhka samada iyo jidhadhka dhulka, laakiin ammaanta kuwa samadu waa mid, oo tan kuwa dhulkuna waa mid kale. 41 Waxaa jirta ammaanta qorraxda iyo ammaanta kaloo dayaxa iyo ammaanta kaloo xiddigaha, waayo, xiddiguba xiddigta kale way ka ammaan duwan tahay. 42 Sarakicidda kuwii dhintayna waa sidaas oo kale. Waxaa lagu beeraa qudhun, waxaana lagu sara kiciyaa qudhunla’aan. 43 Waxaa lagu beeraa maamuusla’aan, waxaana lagu sara kiciyaa ammaan, waxaa lagu beeraa itaaldarro, waxaa lagu sara kiciyaana xoog. 44 Waxaa la beeraa jidh naf leh, waxaana la sara kiciyaa jidh ruux leh. Hadduu jiro jidh naf leh, jidh ruux lihina waa jiraa. 45 Haddaba waxaa qoran, Aadan oo ahaa ninkii ugu horreeyey wuxuu noqday naf nool, Aadankii ugu dambeeyeyse wuxuu noqday ruux wax nooleeya. 46 Hase ahaatee, kan ruuxa lihi ma aha kii ugu horreeyey laakiin kan nafta leh, markaasna kan ruuxa leh. 47 Ninkii ugu horreeyey waa kan dhulka oo cammuud ah, ninkii labaadna waa kan jannada. 48 Sida kan cammuudda ah kuwa cammuud ahina waa sidaas oo kale, oo sida kan jannada, kuwa jannaduna waa sidaas oo kale. 49 Oo sidaynu ugu eg nahay kan cammuudda ah, sidaas oo kale ayaynu ugu ekaan doonnaa kan jannada.
1 Korintos 15: 35-49
Metamorphosis-ka Kansarka: Soo laabashadiisa
Waa soo laabashadiisa marka ay tani dhici doonto.
Laakiin walaalayaalow, dooni mayno inaad jaahil ka ahaataan waxa ku saabsan kuwii dhintay ee waxaannu doonaynaa inaydnaan calool xumaan sida kuwa kale oo aan rajo lahayn. 14 Waayo, haddaynu rumaysan nahay in Ciise dhintay oo haddana soo sara kacay, de sidaas oo kalaa kuwii Ciise rumaysnaa oo dhintay Ilaah la keeni doonaa isaga. 15 Waayo, tan waxaannu idiinku leennahay ereyga Rabbiga in kuweenna nool oo hadha ilaa imaatinka Rabbiga, sinaba ugama hor mari doonno kuwii dhintay. 16 Maxaa yeelay, Rabbiga qudhiisu samaduu kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa’igta sare iyo buunka Ilaah, kolkaasay kuwii Masiixa rumaysnaa oo dhintay horta soo kici doonaan, 17 dabadeedna kuweenna nool oo hadha ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda inaynu Rabbiga hawada kula kulanno, oo sidaasaynu Rabbiga weligeen ula joogi doonnaa. 18 Sidaas daraaddeed hadalladan midkiinba midka kale ha ugu qalbi qabowjiyo.
1 Tesaloniika 4: 13-18
Horoscope-ka Kansarka ee Qoraallada
Horoscope waxay ka timid Giriigga ‘Horo’ (saac) oo macnaheedu yahay calaamadaynta (skopus) saacadaha ama waqtiyada gaarka ah. Nebi Isa al Masih wuxuu calaamadeeyay saacadda Kansarka (horo) habka soo socda
Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Kii ereygayga maqla oo rumaysta kii i soo diray, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, xukunna geli maayo, laakiin dhimashadii ayuu ka soo gudbay oo nolosha u soo gudbay. 25 Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Saacaddu waa imanaysaa, waana joogtaa, markii kuwii dhintay codkii Wiilka Ilaah ay maqli doonaan, oo kuwa maqlaana way noolaan doonaan. 26 Sida Aabbuhu nolol isugu leeyahay, sidaasuu Wiilka u siiyey inuu nolol isugu lahaado.
Yooxanaa 5: 24-26
Waxaa jirta saacad gaar ah oo kii dunida ka hadlay jiritaanku uu haddana hadli doono. Kuwa maqlaana kuwii dhintay ayay ka soo sara kici doonaan. Kansarku wuxuu ahaa calaamadda saacaddan soo socota ee sarakicidda ee ay akhriyeen kuwii hore ee xiddigaha.
Akhriska Horoscope-kaaga Kansarka
Adiga iyo aniga waxaan maanta u adeegsan karnaa horoscope-ka Kansarka sida soo socota.
Kansarku wuxuu kuu sheegayaa inaad si joogto ah u sugto hororka sarakiciddaada. Qaar baa leh qiyaame ma iman doono laakiin yaan la khiyaanayn. Haddaad halkan iyo hadda u nooshahay inaad wax ku cuntid oo wax ku cabtid oo keliya si aad wakhti fiican ugu raaxaysataan markaas waa laydin khiyaaneeyey. Haddii aad hesho adduunkoo dhan oo aad ka buuxdo jacayl, raynrayn iyo raynrayn oo aad naftu waydo maxaad ka helaysaa? Haddaba istaaga. Waxba yaanay ku dhaqaajin. Indhaha ha u eegin waxa la arko, laakiin waxaad u fiirisaan waxa aan la arki karin, waayo, waxa la arko waa ku meel gaadh, laakiin waxa aan la arki karin waa weligeed.
Waxa aan la arkayn dad badan oo hurda oo kula sugaya Codka loogu yeedhayo. Iska tuur wax kasta oo kaa hor istaagaya in aad sawirto waxa aan la arkayn oo iska tuur dembiga sida sahal ah isugu xidhaya. Haddaba dulqaadasho ku orda tartanka laydinku calaamadiyey, idinkoo indhaha ku haya Wanka nool oo ah hormuudka iyo kaamilka rumaysadka. Farxaddii hortiisa taal aawadeed, ayuu iskutallaabta u adkaystay isagoo ceebta quudhsada, oo wuxuu fadhiistay midigta carshiga Ilaah. Ka fiirsada kii u adkaystay diidmadii dembilayaasha inaydnaan daalin oo aydnaan qalbi jabin.
Si qoto dheer u galay Kansarka & iyada oo loo marayo Sheekada Zodiac
Calaamadda Kansarka asal ahaan ma hagi go’aamada caafimaadka, jacaylka iyo barwaaqada. Halkii Kansarka ayaa ka tilmaamay xiddigaha in Bixiyuhu uu dhammaystiri doono madax furashadiisa sarakicidda.
Soo deji PDF ee cutubyada Zodiac buug ahaan
Si aad u bilowdo Sheekadii Zodiac-kii hore bilowgiisa arag Virgo. Sheekada Zodiac waxay ku soo gabagabaynaysaa Leo. Si aad u qoto dheer u gasho Cancer eeg
Qiyaame Midho Ugu Horeeya: Nolosha Adiga
Isa al Masih wuxuu ku dhawaaqay Jihaad ka dhan ah dhimashada lafteeda
Isa al Masih iyo Jimce Wanaagsan
Hadafka Isa al Masih ee Korinta Laasaros
Tags:ancient meaning of cancercancer astrologycancer horoscopecancer zodiac